Rush To The Dead Summer - Myanmar Asian TV Channel
မြန်မာစာတမ်းထိုးကားကောင်းလေးတွေ မပြတ်တမ်းကြည့်ချင်ရင် Myanmar Asian TV Page လေးကို Like နှိပ်ပြီး See First လုပ်ထားနော်!
MMATV ရဲ့ချစ်လှစွာသော ပရိတ်သတ်ကြီးကိုဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ 2017ထွက်Chinese series အလန်းလေးတစ်ခုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
Jun 11ရက်နေ့ကစလွှင့်ခဲ့ပီး July 8 ရက်နေ့မှာမှ ဇာတ်သိမ်းသွားတဲ့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကားလေးပါ။စုစုပေါင်းအပိုင်း(46)ပိုင်းပါဝင်တဲ့ လူငယ်ကျောင်းသားအချစ်ကားလေးပါ။
-မင်းသားနှစ်ယောက်နဲ့မင်းသမီးတစ်ယောက်အဓိကပါဝင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးကတော့ “Love 020″ထဲကမင်းသမီး “Zheng Shuang ” မင်းသားတွေက “Cheney Chen ” ရယ် “Jingting Bai ” တို့ကအဓိကပါဝင်ထားပါတယ်။
-ဇာတ်လမ်းပုံစံလေးကတော့Quianchaung အနုပညာအထက်တန်းကျောင်းမှာရှိတဲ့ ကျောင်းသား/ဆရာ/သူငယ်ချင်းတွေကြားက အဖြစ်အပျက်တွေကိုပုံဖော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
တခြားကျောင်းသားကားတွေလိုမဟုတ်ပဲ အပိုင်းတစ်ကိုစကြည့်မိတာနဲ့ နောက်အပိုင်းတွေကိုဆက်ကြည့်ချင်လောက်အောင် ဆွဲဆောင်ထားနိုင်ပါတယ်။
-ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်….Fu Xia Si နဲ့ Lu Zhi Ang လို့ခေါ်တဲ့အရမ်းခင်တဲ့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။
Fu Xia Si ကတော့main lead တို့ထုံးစံခပ်တည်တည်နဲ့နေတတ်ပီး စကားလည်းနည်းသလို အေးလည်းအေးပါတယ်။Lu Zhi Ang ကတော့ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ။
နှစ်ယောက်လုံးက စာလည်းတော်ပီး စတိုင်မိုက်တာကြောင့် ကျောင်းမှာနာမည်ကြီးပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကငယ်ငယ်လေးတည်းက ခင်လာကြတဲ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေဆိုလည်းမမှားပါဘူး။
-Li Xia လို့ခေါ်တဲ့ အဖေမရှိတော့တဲ့ အေးလည်းအေးတဲ့ ကောင်မလေးရယ် စကားများပီးနေရာတကာပါတတ်တဲ့ Li Xia ရဲ့ဆန့််ကျင်ဘက် Cheng Qi Qi လို့ခေါ်တဲ့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကလည်း အရမ်းခင်တဲ့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပါပဲ။
– အထက်တန်းကျောင်းသားလူငယ်တွေရဲ့ လွတ်လပ်မှု တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကူညီမှု သူငယ်ချင်းတွေကြားထဲကရယ်စရာအဖြစ်အပျက်လေးတွေ ဆရာတွေနဲ့ပက်သက်တဲ့ပဋိပက္ခတွေကို တွေ့မြင်ခံစားရမယ့် ကျောင်သားစီးရီးကောင်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
– ဇာတ်လမ်းရှည် တစ်ပုဒ် ဖြစ်တဲ့ ဒီကားလေးကို ရင်ခုန်ခံစားကြည့်ကြစို့။
Translator : KLP & Khin July Moe
Encoder : MTK
The Negotiator ( 2018 )
ဒီဇာတ်ကားလေးအခု Channel 7မှာလွတ်လမ်းဆိုတဲ့နာမည်နှင့်ပြသလျက်ရှိတဲ့ကားလေးပါ TVကလွှင့်တာကိုမကြည့်နိုင်တဲ့သူတွေလည်းကြည့်ဖို့အဆင်ပြအောင်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်နော် … Review – ၂၀၁၄ကထွက်ခဲ့တဲ့စုံထောက်ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပြီးအဓိကသရုပ်ဆောင်တွေအနေနဲ့မင်းသား Lee Seung-Giနဲ့မင်းသမီး Go Ara(Blackမင်းသမီး)တို့ကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် အွန်ဒယ်ဂူ,အော်ဆူဆွန်း,ပါ့ခ်ထယ်အီ,ဂျီဂု ဆိုတဲ့စုံထောက်အသစ်လေးယောက် သူတို့လေးယောက်ကို P4ဆိုပြီးတော့လည်းခေါ်ကြတယ် ဒါပေမဲ့သူတို့၎ယောက်ကအလုပ်အပေါ်သိပ်ပြီးတက်ကြွစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေမဟုတ်ကြဘူး 😅😅😅 အဲ့လိုနဲ့သူတို့အသစ်၎ယောက်ဟာရာဇဝတ်မှုအဖြစ်များတဲ့ ဂန်နမ်းစခန်းမှာတာဝန်ကျပြီး…. သူတို့ရဲ့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်က ဆိုပန်ဆော့နှင့်တွေ့ကြတဲ့အခါမှာတော့ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့သူတို့ လေးယောက်အပေါ်အားမရမှုတွေ သူတို့လေးယောက်ရဲ့အလွဲတွေကိုဟာသနှောပြီးကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါ့အပြင်အွန်ဒယ်ဂူကကောသူ့ဘဝအမှန်ကိုဘာလို့ဖုံးကွယ်ထားတာလဲ? သူနဲ့ခေါင်းဆောင်ကြားကဆက်နွယ်မှုကဘယ်လိုလဲ? ဆိုတာကတော့ .. စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…
Delicious Destiny ( 2017 )
2017 ထဲမှာထွက်ရှိထားတဲ့ Chinese series လေးတွေထဲကမှ Delicious Destiny ဆိုတဲ့ Comedy Romance ကားလေးကို MMATV Page ကနေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် … စုစုပေါင်း ၅၆ပိုင်းပါဝင်ထားပါတယ် … Delicious ဆိုတဲ့အတိုင်း ဇာတ်ကားထဲမှာဆိုရင် ထိုင်းမင်းသားချော Mike ရဲ့ရှယ်မိုက်တဲ့ဟင်းချက်လက်ရာတွေ ကိုပါကြည့်ရမှာနော် ( အပြင်မှာချက်တတ်လားဆိုတာတော့မသိဘူး ) Mike D’Angelo…
Star April ( 2017 )
တရုတ်ကားလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ပရိတ်သတ်တွေအတွက် Star Aprilဆိုတဲ့ 2017ထွက် Chinese Series လေးပါ … စုစုပေါင်း၄၂ပိုင်းပါဝင်ပါတယ် … ဇာတ်လမ်းကလည်းကောင်းပြီး မင်းသားမင်းသမီးတွေကလည်း တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒိတ်ဒိတ်ကြဲမင်းသားမင်းသမီးတွေဖြစ်တဲ့ Nicky Wu နှင့် Qi Wei တို့က ခေါင်းဆောင် actors တွေအဖြစ် ပါဝင်ထားကြပါတယ် … Nicky Wu ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားတွေကတော့အများကြီးပါပဲ … အဲ့ထဲကမှဆိုရင် The…
Love of Aurora ( 2017 )
2017 နှစ်ဝက်လောက်တည်းက trailer ကြည့် ပြီး အရမ်းကြည့်ချင်နေတဲ့ ဇာတ်ကားလေး 2017 Dec မှာ ထွက်ရှိလို့ လာခဲ့ပါတယ် … ကိုယ်လည်း ကြည့်နေရင်း တခြားသူတွေကိုလည်း ကြည့်ဖြစ်စေချင်တဲ့ စေတနာလေးနဲ့ မြန်မာစာတန်းထိုး လုပ်ဖို့ စိတ်ကူးပြီး Translate လုပ် လိုက် ရပါတယ် … MyDramaList မှာ rating 7.3/10…
Ex Girlfriend’s Club (2015)
1hr 00min min
Korea Comedy romance ကြိုက်သူတွေအတွက်Ex Grilfriend’s Clubတဲ့ကားလေးပါ 2015မှာထွက်ရှိထားပြီး Song Ji Hyo နဲ့ Byun Yoo Han တို့က Main leaderတွေအဖြစ်ပါဝင်ထားပါတယ် IMDb မှာလည်း 7.8/10ထိရထားပြီးတကယ် အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကားလေးပါ Ji Hyo ပရိတ်သတ်တွေလည်းကြိုက်ကြမှာပါ 😍😍 ဇာတ်လမ်းလေးကတော့*** ဘန်မြောင်ဆိုး(Byun Yo-Han)က နာမည်ကျော် webtoon…
That Man Oh Soo (2018) မြန်​မာစာတန်းထိုး 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜 OCN ရုပ်သံကနေ March လ 5ရက်နေ့ကနေစတင် ထုတ်လွှင့်ပြီးတော့ အပတ်စဉ် တနင်္လာနဲ့အင်္ဂါနေ့တွေမှာပြသမဲ့ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲလေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးဟာဆိုရင် အပိုင်းပေါင်း ၁၆ပိုင်း ထုတ်လွှင့်ပြသမှာဖြစ်ပြီးတော့ Fantasy, Romance Comedy ဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ် မင်းသားအနေနဲ့ကတော့ Lee Jong Hyun (CNBLUE)…
အကုန်လုံး Riverdale Season 1 ကို ကြည့်ပြီးကြမယ်ထင်ပါတယ် … အခု Season2လေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ် … Season 1 ရဲ့ နောက်ဆုံးပိုင်းလေးမှာ ဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကို ကြည့်ပြီးသူ အားလုံးလည်း သိပြီးကြရော နေမှာပေါ့ … အဲ့တော့အခု Season2အစကို အဲ့နေရာကနေ ဆက်ထားပါတယ် ……
Genre: Comedy, Mystery, Teen Drama
2018အစမှာထွက်ရှိလာတဲ့ Untouchable Lovers ဆိုတဲ့ series လေးကတော့ Tianyi Youfenng ရဲ့ Feng Qui Huang ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုကို အခြေခံပြီး ရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်…. **Review** လျိုကျိယဲ့ မင်းသား နန်းတက်လာသည့်အချိန်…. လျိုကျိယဲ့ဟာ အသက်ငယ်ရွယ်ပြီးတရား လက်လွတ်နိုင်ထက်ကလူပြုတဲ့ မင်းတစ်ပါးဖြစ်တာကြောင့် တိုင်းသူပြည်သားတွေအနေနဲ့ ကြောက်လန့်နေကြရတယ် ဒါ့ကြောင့် ထျင်ကျန်းဂိုဏ်းဟာ လျိုကျိယဲ့ကို ဖယ်ရှားဖို့အတွက်…
Genre: Action & Adventure, Drama, History, Melodrama
Queen of Mystery S2 (2018)
2018မှာထွက်ရှိထားတဲ့ongoing ကားလေးပါ ဒီကားလေးကမနှစ်က season 1 ထွက်ထားတား (1မကြည့်ဖူးလည်းseason2ကစကြည့်လဲအဆင်ပြေပါတယ်) မြန်မာပရိတ်သတ်တွေ ဆုန်ဂျူးလို့သိကြတဲ့မင်းသားKwon Sang Wooရယ်မင်းသမီးChoi Gang Heeတို့ကအဓိက သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းက*** လျှို့ဝှက်ဆန်းကျယ်ဝတ္ထုတွေဖတ်ရတာကြိုက်ပြီး စုံထောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့ပေမယ့်အိမ်ထောင်ကျသွားတော့ရှေ့နေဖြစ်တဲ့ယောက်ျားကိုပံ့ပိုးပေးပြီးအိမ်ရှင်မအဖြစ်နဲ့ပဲနေတဲ့ယိုဆိုအုတ်နဲ့ …….. အလုပ်အပေါ်ရူးသွပ်တဲ့စုံထောက်ဟာဝန်ဆောင်း သူတို့နှစ်ယောက်ဆုံမိပြီး အမှုတွေတူတူလိုက်ကျတယ် အခုseason2မှာတော့ယိုဆိုအုတ်ကယောက်ျားနဲ့ကွာလိုက်ပြီးသူဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်တော့တယ် သူတို့နှစ်ယောက်အတူတွဲပြီး ဘယ်လိုလျှို့ဝှက်တဲ့အမှုတွေကိုဖော်ထုတ်သွားမလဲဆိုတာ အားပေးကြပါအုံး အပိုင်း၁၆ပိုင်းပါပြီးတော့ KBSရုပ်သံလိုင်းကဗုဒ္ဓဟူး ကြာသပတေးလွှင့်တာပါအတတ်နိုင်ဆုံuးpdateဖြစ်အောင်တော့တင်ဆက်ပေးပါ့မယ် အားပေးပါအုံးလို့ ကျေးဇူးပါ…
ဒီတခါတော့ လေဒီတို့အသည်းကျော်မျောက်(အိုဂုံ)လေးကို အလွမ်းပြေကြည့်ဖို့ အိုဂုံရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲအဟောင်းလေးတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးကို ၂၀၁၂ မှာ MBC ရုပ်သံလိုင်းကလွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး IMDb 8/10 ရထားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့…… ဘုရင်လုံးဝမဖြစ်ချင်၊ ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်သာသိတတ်၊ ဖြတ်ထိုးဥာဏ်လည်းအင်မတန်ကောင်းတဲ့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အိမ်ရှေ့စံမင်းသား လီဂျယ်ဟာ (ယူတို့ရဲ့အိုဂုံလေး/Lee Seung-Gi) နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ အထူးတပ်ဖွဲ့ စစ်ရေးပြနည်းပြဖြစ်ဖူးသူ၊ လက်ရှိမှာလည်း တပ်ထဲမှာ…
Created with ❤️ by www.MyanmarAsianTV.com